Women News – Page 15 – For her myanmar
ယောင်းတို့ မိန်းကလေးတွေမှာဒီလို မယုံနိုင်စရာအပြုအမူလေးတွေရှိနေတာသိပါသလား။
Posted on April 30, 2017 Author Hana	Comment(0)
ကျွန်မက ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့အခါ
လူလူချင်းတူပေမယ့် ယောကျာ်းသား မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့…။
Posted on April 11, 2017 July 7, 2019 Author Adrien	Comment(0)
“သူတို့က အဲဒီလိုမူးအောင်သောက်တာအထိခံ အကိုင်ခံချင်လို့ကွ” ယောကျာ်းရင့်မာကြီးတစ်ယောက်ပြောသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။
Posted on March 27, 2017 Author Comment(0)
ကြားပြီးပြီလား? ဟို Mister Asia winner ဆိုတဲ့ ဘဲကြီးတစ်ပွေလူမဆန်တဲ့အကြောင်းလေး?
Posted on March 23, 2017 Author Comment(0)
စာကျက်ချင်စိတ်ပေါက်စေမယ့် ဂျက်မင်ကိုယ်တွေ့ နည်း
စာမေးပွဲနီးနေပေမယ့် စာကြည့်ဖို့ ခုထိ အာရုံစူးစိုက်လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်
Posted on March 16, 2017 Author Jasmine	Comment(0)
Family Knowledge Love Women News
ရှင် ယောက်ျားဆို ကျွန်မက မိန်းမ
ယောက်ျားများသည် မိန်းမသားများထက် မြတ်သည် လင်ယောက်ျားကို ဘုရားကို ကိုးကွယ်ရမည် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ အယူအဆတွေကို စွန့်လွှတ်ကြရအောင်။
Posted on March 15, 2017 March 15, 2017 Author Jasmine	Comment(0)
အမျိုးသမီးများနေ့ မတိုင်ခင်က ယောင်းယောင်းတို့ကို ယောက်ျားမိန်းမ ခွဲခွဲခြားခြား ဆက်ဆံခံရတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ယောင်းယောင်းတို့ရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားသံလေးတွေကို မေးခဲ့တယ်နော်။ ကွန်မန့်အောက်မှာ ပေါက်ကွဲထားတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Posted on March 9, 2017 March 9, 2017 Author Jasmine	Comments Off on ယောင်းယောင်းတို့ရဲ့ ပေါက်ကွဲစကားသံများ
အေးမြ၏ ဖန်တီးရှင် ပန်းချီဆရာမ မချမ်းနှင့် တစ်ခဏ
ကိုယ်ဝါသနာပါရာကို တစ်စိုက်မတ် လုပ်ကိုင်ပြီး မြန်မာအမျိုးသမီး ပညာရှင် တစ်ဦးအနေနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ မချမ်းနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့အတွက် အထူးတင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
Posted on March 8, 2017 March 9, 2017 Author Comment(0)
ပုဆိုးစပေါ် ဆက်ဆီမိန်းကလေးပုံရေးတဲ့ ပန်းချီဆရာမေလးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on February 17, 2017 May 21, 2019 Author Adrien	Comment(0)
ကိုယ့်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်မယ့်သူဟာ နဖူးမှာစာကပ်ပြီးလာတာ မဟုတ်လို့ သတိထားမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လေဆိပ်ဆိုတာက လူဝင်ထွက်သွားလာများတဲ့ ဆုံချက်နေရာတစ်ခုပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ဆရာဝန်/အင်ဂျင်နီယာများ ဝန်ထမ်းများသာမက အားလပ်ရက်ခရီးထွက်သူများနှင့်ပါ ပြည့်နှက်နေသော နေရာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒီလို သွားလာလှုပ်ရှား အလုပ်များနေတဲ့သူတွေ ကြားမှာမှ ဒုစရိုက်သမားတွေက ရုပ်ဖျက်ထားပါတယ်။ လူကြားထဲမှာ သူတို့ကို ရုတ်တရက် မမှတ်မိနိုင်ဖို့ရာ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုများ ရုပ်ဖျက်ထားပါသလဲ။ ထွက်ခွာတော့မယ့် ခရီးသည်တွေဟာ သူတို့ရဲ့သားကောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ အမိနိုင်ငံရဲ့ ဝေးရာမှာ ဒုက္ခရောက်စေပြီး သူတို့ပြုသမျှ နုတာ ခံနိုင်စေဖို့ပါ။ read more >>> အသည်းကွဲတဲ့အခါ နားထောင်သင့်တဲ့သီချင်းများ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ဒုစရိုက်သမားတွေကို ခြေရာခံနိုင်မယ့် အမှတ်အသား လက္ခဏာတွေကို လေကြောင်းလိုင်း ဝန်ထမ်းများအား […]
Posted on February 12, 2017 February 12, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)